အရေပြား အဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်း - Hello Sayarwon
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ သင့်အတွက် အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်လိုပဲ လူအတော်များများသည်လည်း ဒီရောဂါအကြောင်း စုံစုံလင်လင် သိမထားကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးမှ အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ လူသိနည်းသလောက် အလွန်အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှု၊ နှင်းခူရောဂါတို့နဲ့ ဆင်တူပေမယ့် သင့်ကျန်းမာရေးကိုတော့ ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သင့်ကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပြီး နေရထိုင်ရခက်စေမယ့် အရေပြားပြဿနာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းမရှိသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ သူ့အလိုလို သက်သာသွားနိုင်ပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာလိုက်၊ ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ ကာလရှည်ကြာ ဖြစ်လေ့ရှိတာများပါတယ်။ ဆောင်းရာသီလို ရာသီဥတုအေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ရောဂါပြန်ထလာလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းကို cradle cap လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးရေပြားမှာ ချွဲကျိကျိ အဖတ်ထူထူတွေ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုတော့ ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကလေးငယ်တွေရဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ အနီရောင်အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်လာတာကိုလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ကလေးအသက် ၆လမှ တစ်နှစ်အတွင်း ရောဂါသက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကြောင်းအရင်း အတိအကျကို မသိရသေးပေမယ့် အောက်ပါအခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တော့ ယူဆထားပါတယ်။
လိင် – ဒီရောဂါဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်
အသားအရေ – ဒီရောဂါဟာ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေသူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
Malassezia ခေါ် အရေပြားမှိုတစ်မျိုး
အသက် – ဒီရောဂါဟာ အသက် ၃လနှင့်အောက် ကလေးငယ်တွေနဲ့ အသက် ၃၀နှင့် ၆၀ကြား အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အချို့သောဆေးဝါးများ – interferon၊ lithium၊ psoralen သောက်သုံးသူတွေမှာ ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါတယ်။
အချို့သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ – HIV၊ ဝက်ခြံ၊ psoriasis ခေါ် အကြေးခွံကဲ့သို့ အနီရောင်အကွက်ကြမ်းများ ထွက်သည့် အရေပြားရောဂါတစ်မျိုး၊ စတီးရွိုက်ကြောင့် သွေးမှင်ထခြင်း၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ စိတ်ရောဂါများ၊ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ပြန်လည်သက်သာလာချိန်၊ လေဖြတ်ပြီး ပြန်လည်သက်သာလာချိန်၊ အတက်ရောဂါ၊ အရက်စွဲရောဂါ
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မျက်နှာ၊ နှာခေါင်းပတ်ပတ်လည်၊ ဦးရေပြား၊ နားရွက်နောက်၊ နားရွက်အတွင်း စတဲ့ အဆီပြန်တတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ရင်အုပ်အလည်ပိုင်း၊ တင်ပါး၊ သားမြတ်အောက်၊ လက်မောင်းအောက်နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆံပင်နှင့် မျက်ခုံးမွှေးများ ဗောက်ထခြင်း
အရေပြားပေါ်တွင် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင် အကြေးခွံသဏ္ဍာန် ချွဲကျိကျိ အဖတ်များ အထပ်လိုက်ပေါ်ခြင်း
ပူစပ်ပူလောင်၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရခြင်း
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှုမှာ ရောဂါအတွက် အသုံးပြုဖို့သင့်တော်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ခရင်မ်နဲ့ လိုးရှင်းတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်က အခြားဆေးဝါးများ မပေးခင် အိမ်သုံးဆေးဝါးများနဲ့ အရင်ကုသဖို့ အကြံပြုလိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဆေးဆိုင်များမှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းပစ္စည်းတွေရဲ့ အသုံးပြုပုံအညွှန်းကို ဖတ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီရောဂါအတွက် သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိသိနိုင်ပါတယ်။ Salicylic acid၊ resorcin coal tar၊ ketoconazole၊ zinc pyrithione၊ selenium sulfide စတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဦးစားပေးအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်တွေမှာတော့ ဗောက်ပျောက်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အရေပြားထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် ရေနွေးနဲ့ရေချိုးပြီး အပျော့စား ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းမှု ဖြစ်စေတဲ့ ကပ်ပါးမှိုကို နေရောင်ခြည်က သေစေနိုင်တဲ့အတွက် ရောဂါရှိသူအချို့ဟာ ဆောင်းတွင်းထက်စာရင် နွေရာသီမှာ ရောဂါလက္ခဏာ သက်သာလေ့ရှိတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကုသမှု နည်းလမ်းတစ်မျိုးကတော့ ကပ်ပါးမှိုများကို သေစေနိုင်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆေးဝါး အသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ ဆေးဝါးများ သောက်သုံးခြင်း၊ စတီးရွိုက်ပါဝင်တဲ့ လိုးရှင်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ အလင်းရောင်ပြခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရောဂါအခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး ကုသမှုတစ်မျိုး ဒါမှမဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုပြီး ခံယူရနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုခံယူနေပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာ မသက်သာဘူး၊ နာကျင်မှု၊ အရေပြား နီရဲရောင်ရမ်းမှု၊ သွေးယိုစိမ့်မှု စတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
အရေပြားအဆီပြန်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဦးရေပြားမှာ ရောဂါလက္ခဏာပြတတ်ပြီး အချို့လူတွေမှာ အလိုအလျောက် သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောဂါဟာ ကာလကြာရှည် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အတွက် ကုသမှုခံယူခြင်းက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
4. Seborrheic dermatitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seborrheic-dermatitis/basics/definition/con-20031872. Accessed March 10, 2017.